China Venetian Mapofu Kunze uye Kambani | ETEX
Isu tinoburitsa akasiyana evenitians mapofu. Type:
● Wood VeVenetians Mapofu, Bamboo Venetian Mapofu
● PVC Faux Wood Venetian Mapofu
● Aluminium Venetian Mapofu
Kune mhando dzakasiyana dzemasisitimu anokodzera kuti venetian blinds use:
● Cord System
● Chain System
● Mota System
VeVenetian blinds, dzimwe nguva vanozivikanwa se slat blinds kana rakakomberedzwa mapofu, gadzira yakanaka nzira yemachira uye inogona kugadzira inotaridzika uye yemazuva ano kutaridzika mukati meimba yako. Tine huwandu hwakanakisa hwemapuranga evenetian blinds, aluminium venetian blinds, uye faux huni venetians iyo isingangounze kudzika nekudziya kwekushongedza kwako, asi ikubatsire iwe kudzora kutonga kwechiedza nekuvanzika kwemazinga zviri nyore. Ichena mapuranga evenetian emapofu mamwe emapofu anokanganisa aunogona kutenga, achishanda zvakanaka nechero dhizaini kana dhizaini yekushongedza. Mapofu venetian mapofu anowanzo shanda zvakaenzana kwese kupi. Kuti uwedzere kutarisa uye kunzwa zvimwe, tarisa yedu mhando yealuminium venetian blinds. Iyo yakasimba zvinhu haigoni kukotama kana kutu Kana iwe uchizoda kutarisa kwekutanda kwemapuranga slat mapofu, asi uchida chimwe chinhu chakaoma kupfeka kana chakawedzera-mutengo, tarisa yedu yefaux yehuni venetian blinds. Ndidzo dzakanakisa dzese nyika!
Kunyangwe iwe uchitsvaga matoni asina kufanana nemapuranga akachena mapuranga kana grey venetian kuti ifukidze kushongedzwa, kana kuti uri kutsvaga kutaura kwakajeka nemapuranga emadziro emapuranga mumatani anopenya, une chokwadi chekuwana mutambo wako wakanaka paDunelm.
Yedu yakarongedzwa yakagadzirwa venetian mapofu anowanikwa mune yakakura saizi yakaringana akasiyana emhando yemahwindo uye ari nyore kuisa, Zvisinei, kana iwe uine usingaenzaniswi windows, kana unongoda mamwe akakwana eveniti blinds akavakirwa kune yako chaiyo maitiro uye yakatarwa
VeVenetian Blinds kushandiswa kwakakwana uye kwakakodzera hotera, kushongedzwa kwemba, kofi, hofisi, zvitoro, furati uye yekutengeserana nzvimbo dzekuvakira.
Yepfuura: Vertical Bofu Mashizha
Inotevera: Readymade Vertical Bofu